Ogaden News Agency (ONA) – Wadahadalkii Nabadeed ee u dhexeeyay ONLF iyo xukuumadda Itobiya oo istaagay
Wadahadalkii Nabadeed ee u dhexeeyay ONLF iyo xukuumadda Itobiya oo istaagay
Wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeyay ONLF iyo xukuumadda Itoobiya oo joogsaday
Wareeggii labaad ee wadahadalladii u dhexeeyay Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya JWXO iyo xukuumadda Itoobiya ee ay dhexdhexaadinaysay, isla markaana marti-gelisay dowlada Kenya, ayaa lagu qabtay magaalada Nayrobi intii u dhaxaysay 15 – 17/10/2012. Ergada JWXO waxaa hoggaaminayay xoghayaha arrimaha dibada C/raxmaan Mahdi, midda Itoobiyana waxaa hoggaaminayay wasiirka gaashaandhigga Seraj Fegesa. Kooxda dhexdhexaadinta ee dowlada Kenya waxaa iyadana hoggaaminayay wasiirka gaashaandhigga Mudane Yuusuf Xaaji.
Ka dib markii ay xukuumadda Itoobiya ka codsatay Dowlada Kenya inay dhexdhexaadiso iyada JWXO, waxay dowlada Kenya la xidhiidhay Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya, oo iyadun dhinaceeda aqbashay inay si dhab ah u gasho wadahadallada ay Itoobiya soo codsatay. Wadahadalladan waxaa iyaguna gacan ka gaystay beesha caalamka.
Wareeggii kowaad ee wadahadallada rasmiga ah, wuxuu wadaxaajoodku u qabsoomay si hab-sami ah, iyadoo dhinacayada ka qayb galaya ay isla gaadheen heshiis ku saabsan qaabka wadahadalka, mabaadii’da guud iyo ajandaha wadaxaajoodyada.
Wareeggii labaad ee wadahadallada, ergada xukuumadda Itoobiya waxay ku tunteen mabaadii’dii horay loogu heshiiyay, kuwaasoo dhigayay “in wadaxaajoodyadu ku salaysnaadaan mabaadii’ la isla oggol yahay iyo inaan lagu xidhin shuruud hordhac ah oo lagu wiiqayo dabeecadda iyo ujeeddada wadaxaajoodyada nabadeed”, waxayna laaleen arrin gun-dhig u ahayd khilaafka, iyagoo ku adkaystay in sii wadista wadahadalku ay ku xidhan tahay in JWXO oggolaato dastuurka Itoobiya. Nasiib darro ergada Itoobiya waxay shuruudan hordhaca ah ku mooseen isku day kasta oo wadahadalladu ku sii socon lahaayeen.
Mawqifka JWXO ee ku aaddan dastuurku wuxuu ahaa inay waajib tahay in dastuurku uu ka turjumo doonista shacabka, iyo inaan dadka Soomaaliyeed ee Ogaadeenya waligood laga qaadin afti lagu waydiinayo dastuurka. JWXO waxay rumaysan tahay in xal u-helidda dhibaatada Ogaadeenya lagu gaadhi karo oo kaliya iyadoo la oggolaado xaqa ay dadka Soomaaliyeed ee Ogaadeenya u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan iyadoon lagu xidhin shuruudo hordhac ah ama aan caqabado la hor-dhigin.
Wadahadalka nabadeed waxay ahayd in lagaga hadlo arrimaha ay labada dhinac isku khilaafsan yihiin oo dhan. JWXO waxay soo jeedisay in labad dhinac ay wadahadalka sii wadaan iyagoo ka duulaya heshiiskii hore, isla markaana ay billaabaan tallaabooyin kalsoonida lagu dhisayo oo abuuri kara jawi habboon oo caqabada lagaga gudbi karo. JWXO waxay diyaar u tahay wadahadallo nabadeed oo ay la sii wado xukuumadda Itoobiya.
Warsaxaafadeedki ONLF oo English ah
Malas ayaa tijaabiyay inaan Ogaadeenya xoog lagusii guumaysan karin, laakiin waxaad moodaa inayna Itoobiya wali damicii guumaysiga sifiican ooga quusanin.
Maxaa isku xidhay wada hadalka aftida iyo dastuurkooda?